ယ့ၫရှူၬမၩဘျၪထဲၩ့ရိမၫ အၥုၭခိၪအခ့ၫအၡၩလဂၩ. | Radio Veritas Asia
ထီးအလ့ၩနုၬဝ့ၫ လၧကပၧနအၫ့အဖၧၩ့နီၪ ၥုၭဖိၪ လယၩအခိၪလဂၩ ဂဲၫလၧအအီၪတၭ အၪ့ကံၩ့အၪ့ယၫဝ့ၫ စံၭဝ့ၫဒၪ ကဆါဧ့ ယခ့ၫယၡၩလဂၩၥံၫလခီၫဖၩတၭ ဆီၫ့ခိၬဆီၫ့ကဲၩ့နၭလ့ၬတၭ မံၫနၩ့လၧဂံၪ့ဖၧၩ့လီၫ.- ယ့ၫရှူၬစံၭ ယမိလ့ၩမၩဘျၪထဲၩ့ အဝ့ၫနီၪလီၫ.- ၥုၭဖိၪလယၩ အခိၪနီၪစံၭဆၧၫ့ဝ့ၫ စံၭဝ့ၫဒၪ ကဆါဧ့ နဂဲၫနုၬလၧယဂံၪ့ခိၪဖၫ့လၬယီၩ ယကြၨၭအ့ၬး နအ့ၪစံၭလၧနလူနးထံၪတၭ ယခ့ၫယၡၩ မိဘျၪထဲၩ့ဝ့ၫလီၫ.- အဂဲးဘဲၫယီၩယဝ့ၫဒၪ ယမွဲၦၡၩအီၪ လၧဆၧအစီၩ့အမၩ့အဖၫ့လၬတၭ ၥုၭဖိၪၥ့ၪဖိၪအီၪလၧယဖၫ့လၬဆ့လီၫ. ယစံၭအယီၩလဂၩ လ့ၩဘီၪ တၭလ့ၩဝ့ၫလီၫ. အနီၪလဂၩ ဂဲၫဘီၪ တၭဂဲၫဝ့ၫလီၫ. ယခ့ၫယၡၩနီၪ မၩဆၧယီၩဘီၪ တၭမၩဝ့ၫဒၪလီၫ.-
ထီးယ့ၫရှူၬ နါဂၧၫ့ဆၧနီၪ ထီၫမံၫထီၫမၪဝ့ၫတၭ စံၭၦဖိၬအခဲၫ့လဖၪနီၪ ယလီၩဘၪနၥံၪတီၩတီၩယီၩ လၧအံၫစရ့လၭအကျၩ ဒၪလ့ၬနီၪ ဆၧနဲၩအၪန့ၫအယီၩ ယဒၪဘၪအ့ၬ.
ယစံၭနၥံၪ ၦအၪဂၩ မိဂဲၫလၧမုထၪ့ဒဲလၧမုနုၬတၭ မိဆၧၫ့နၩ့ဒံၩ့ခံၫ့ လၧစပွဲထံၭ လၧစအၫဘြဟၫ့ ဒဲစအံစၭ ဒဲစယၫကူၭအၥိၭ လၧမူၭခိၪအဘၩ့အမုးအဖၧၩ့လီၫ. အ့ၪမွဲဘၩ့ဖိၪမုးဖိၪလဖၪနီၪ ဆၧမိနၫ့ ထၪ့ခွံၬအဝ့ၫၥံၪ လၧဆၧခံၭကျၩလၧခီၫ့တၭ ဆၧဘၪ ဂၪ့ဆၧဘၪယၧၩ့ ဆၧခၪအဲၪ့ထံးနီၪ မိအီၪဝ့ၫဒၪထီးနီၪလီၫ.-
ယ့ၫရှူၬစံၭ ၦၥုၭဖိၪလယၩအခိၪလဂၩနီၪ ထဲၩ့ ထဲၩ့ဘီၪ ဘဲၫနနဲၩဆၧအၥိၭနီၪ မွဲအကဲၪထၪ့ဒၪဝ့ၫဆံၭ. အခ့ၫအၡၩဘျၪထဲၩ့ဝ့ၫဒၪ လၧနၩရံၩနီၪလီၫ.
ယ့ၫရှူၬလ့ၩနုၬဝ့ၫ လၧစပံတၧၫအဂံၪ့ဖၧၩ့တၭ ဒၪ ဘၪအမံၩ့ၡါမုၪမံၫနၩ့ဝ့ၫတၭ ဘၪဆၧဆူၪဂိၬလီၫ. အဝ့ၫဒၪ ထိၭဘၪအစူၪတၭ အဆၧဆူၪဂိၬနီၪ စဲၪ့ထၪ့ခွံၬဝ့ၫတၭ ဂဲထုၪ့မၩအခ့ၫအၡၩအဆၧလီၫ.- ထီးမုဂၪလၩ့တၭ ၦဂဲၫဆိၬၦၡၩ လၧဆၧနၪအီၪလၧအလီၩ့အၪဂၩ လၧအအီၪတၭ အဝ့ၫဒၪနၫ့ထၪ့ခွံၬ ဆၧနၪလၧအလူလထံၪတၭ မၩဘျၪထဲၩ့ကယဲ ၦလၧအဆၫလဖၪနီၪ ထီးအလူၬလီၫ.- မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ မီၪအဲၫစ့ယၫ အလူလၧၫ့ထၪ့ဎွ့ၩထၪ့ဝ့ၫတၭး စံၭဝ့ၫဒၪ အဝ့ၫဒၪ အနၫ့ဆါ ဒၪ ဝ့ၫ မၩ န့ ပ ဆၧ ဆီၫ့ ကိၭ ဆီၫ့ ကဲၩ့တၭ ဆိၬ န့ ပ ဆၧ ဆၫ လီၫ.